Akọrọ ash nnukwu Loader - China Kechengyi Environmental Protection na Electric Power Technology
Akọrọ-ụdị slag njikwa ngwá maka bibiri Kol ji esi mmiri ọkụ
Akọrọ-ụdị slag ebu
Large slag extrusion ngwaọrụ
Iji aka etinyere
Single - mpịakọta slag igwe
Akọrọ ash nnukwu Loader
Pneumatic nkwụnye ụzọ
Slag silo na inyeaka ngwá
Wet-ụdị slag njikwa ngwá maka bibiri Kol ji esi mmiri ọkụ
Hydraulic shutoff ụzọ
Akpụcha slag ebu
Slag ebu maka gasification ọkụ ji esi mmiri ọkụ
Esi mmiri ọkụ ash mwepụ ngwá
Ash biini na inyeaka ngwá
Na ok adọ pneumatic ash erute usoro
Itughari na-adọ pneumatic ash erute usoro
Manual slide efere eke
Pneumatic nkume nzu erute usoro
Fluidized bed ji esi mmiri ọkụ slag mwepụ ngwá
Chain ịwụ ebu
Drum ụdị ash oyi
Electric ikuku-mkpọchi feeder
Agbakwunyere akpụcha ebu
Iji aka slide efere ámá
Box-ụdị ash flusher
Electric ịkụ gọlfụ nkwonkwo
Manual ịkụ gọlfụ nkwonkwo
Ịghasa agwakọta ash ebu
Single mpịakọta slag crusher
Rotary mmiri na nkwonkwo
SZJ Series kpọrọ nkụ Ash Bulk Loader
The SZJ - 100A tanka nnukwu Loader bụ na ọdabara ka electric ike na chemical ụlọ ọrụ, nke nwere ike ibu akọrọ powder ihe n'ime nnukwu tanka. Ọ na-bụ-eji maka ebutu ihe na akọrọ-ụdị ájá remover, ash hopper na ash silo na tanka. Otutu Loader nwere ike ịrụ ọrụ njikọ chiri na nri ngwaọrụ n'okpuru hoppers / silos, na mgbe tanka jupụtara ihe onwunwe, na Loader ga-akwụsị ebutu-akpaghị aka. N'ihi na akpaka loading usoro, elu loading arụmọrụ na ala powder mmetọ, nnukwu Loader bụ ezigbo ngwá maka loading na ebutu nnukwu powder ihe onwunwe.
2 Main Structure na-arụ ọrụ Ụkpụrụ
1) retractable Bulk Loader
The retractable nnukwu Loader mejupụtara nnyefe mgbodo, hoisting ngwaọrụ, nnyefe ngwaọrụ, omume rụrụ eriri usoro, ọwa ígwè oche, larịị egosi, ájá iyuzucha akwado, ash paseeji, ájá iyuzucha anwụrụ, na Loader isi. The ash aga n'ime tanka site ash paseeji site ike ndọda. The ájá n'etiti paseeji na ájá iyuzucha anwụrụ na-anakọtara n'ájá akpa ma ọ bụ silo site ájá iyuzucha ofufe. The paseeji na ájá iyuzucha anwụrụ bụ retractable ọjà, site n'omume na ẹsụhọde ọjà, Loader isi nwere ike iweli ma ọ bụ zie na tanka ka imeghari ka ụgbọ mmiri tanker na dị iche iche elu.
Mkpọlite ​​na ẹsụhọde nke Loader isi na-enweta site ndoli nnyefe usoro na nchekwa akara ngwaọrụ na omume rụrụ eriri usoro.
Mgbe Loader isi jụrụ elu ịgba ọnọdụ a na-achịkwa ndị ọrịa strok mgba ọkụ nke nchekwa akara usoro; mgbe Loader isi lowers, na ndoli tọhapụrụ ndị eriri, na isi na-akpali ala site na ike ndọda na ga dakọtara tightly na elu mmeghe nke tanka. Nọgide na-hapụ eriri, eriri ga-kpamkpam ida kwụsịtụrụ ibu, na ọrịa strok mgba ọkụ nke rụrụ eriri usoro ga-eme ka o bipụ ike iji kwụsị ndoli moto.
2) Ọkwa egosi
The ọrụ nke larịị egosi a na-enweta site siri ike n'iji ya gee ntị ndụdụ ụdị larịị egosi ma ọ bụ na pneumatic larịị egosi. The ihe onwunwe larịị ga-amụba mgbe malite udia ihe na-emetụ na nyocha, na egosi ga-eziga mgbaama kwụsị nri na-akpaghị aka, na ndoli ga ebuli nnukwu Loader isi.
3 ụzụ oke
Loading ikike t / h
Ihe Ihapu anwụrụ n'obosara φmm
Ihe Ịchịkọta Pipe dayameta φmm
Loader Head MKpọnwụ mm
Loader Head Lifting Speed ​​m / min
Size (Ogologo × Obosara × Elu) mm
Previous: Bag ájá iyo - bag
Next: Steel gbalaga erute na-akwọ ụgbọala okporo
Akọrọ Type Bulk Loader
Mgbanwe Joint Type tanka Bulk Loader
retractable Bulk Loader
Uwe-Type tanka Bulk Loader
Tanka Bulk Loader
Tanka nnukwu Loader
No.62, Xinjiang ụzọ, jiaozhou obodo, Qingdao obodo, Shandong n'ógbè, China
Iji na-agbawa agbawa maka esi mmiri ọkụ Deslagging
esi mmiri ọkụ Deslagging